गोरु जुधाइ हेर्न हेलिकोप्टर
नेपाल सम्पन्न भएकै हो । अधिकांश जनता गरीवीको रेखामुनी रहे पनि केही नेता र धनाध्येहरु गोरु जुधाएको हेर्न समेत हेलिकोप्टरमा जानसक्ने हैसियतका देखिए । तिनको यो कालो धन हो कि सेता ? हेर्ने, जाँच्ने कसले ?
त्यसै जनवादी गीत बनेको होइन ? ‘कोही त भने मोटरमा सरर, कोहीका भने आँसु बरर..’ हुन त जनवादी भन्नेहरु पनि धनवादी बने । धनले मात्तिएर तिनले जनतालाई जन्तु देख्न थालेका छन्, मान्छेलाई मान्छे गन्न छाडेका छन् । हेलिकोप्टर चार्टर गरेर साँढे जुधाएको हेर्न जाने पनि जनवादी नै हुन् । यी कस्ता जनवादी, जो जनजीविका हेर्दैनन्, जनता दिनदिनै गरीवीको पहाडले थिचिएर मरेको देख्देनन् र आफूचाहिं यसरी हेलिकोप्टरमा सरर... घुम्छन् ।
घनश्याम भुसाल भन्थे– शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउने व्यक्ति कम्युनिष्ट नै होइनन् । कम्युनिष्टका गुरु मोहनविक्रम सिंहको कथन छ– नेपालका कम्युनिष्टहरुको स्कूलिङ साह्रै राम्रो भएको हो । अहिलेका कम्युनिष्ट नेताहरु कम्युनिष्टजस्ता लाग्दैनन् । साह्रै बिग्रछ्न् मोराहरु । होइन कसरी भन्ने ?